YEYINTNGE(CANADA): Thursday, August 02
ဧရာဝတီ၏ ပရိသတ်တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်ခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/02/20120အကြံပြုခြင်း
နင်းပြားဝန်ထမ်း ပြည်သူများ၊ ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၂ ပေးစာ (၁) – ၀န်ကြီးဌာနတခုလုံး အမျိုးနဲ့ ခရိုနီတွေချည်းပဲ ကျနော်ဟာ လျှပ်စစ်(၁) ၀န်ကြီးဌါနက အရာထမ်းတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဌါနက ၀န်ထမ်းရေးရာ ရာထူးတိုး အပြောင်းအရွေ့ မသမာမှုတွေ အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ၀န်ကြီး(ဦးဇော်မင်း)၊ ညွှန်ချုပ် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးတို့ဟာ ၄င်းတို့နဲ့ နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုး တပည့်သားမြေးတွေနဲ့ ငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာ ရာထူးတိုး မြှင့်ပေးလျှက်ရှိပြီး ရာထူးအလိုက် သိန်း ၂၀၀ -၃၀၀ အထိ ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ တည်ဆောက်ရေး အမှတ် (၁) ကိုရွေ့ပြောင်းဖို့ အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှုး (၂)ယောက် အပြိုင်ဈေး ပေးကြရတာ သိန်း (၈၀၀) အထိရောက် နေကြောင်း ၊ ကာယကံရှင် ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု့အလိုက် လုပ်သက် အလိုက် အရည်အချင်းအလိုက် တိုးမြှင့်ပြောင်းရွေ့ပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်တဲ့ အတွက် ဌါနတွင်းမှာ အုပ်ချုပ်မှု့ ပျက်ပြားပြီး ခြစားမှု့တွေ မသမာမှု့တွေ တိုးပွားလျှက်ရှိပါတယ်။ လူမှန်နေရာမှန် မရှိတဲ့ အတွက် ကြိုးနီစနစ်တွေ များပြီး ရစ်ခွေနေကြတာနဲ့ အလုပ်မဖြစ်သလို နည်းပညာပိုင်းမှာလဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားပြီး စီမံကိန်းတွေမှာ ဆုံးရှုံးမှု့တွေ ကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်။ ရဲရွာ စီမံကိန်းနဲ့ ကွန်းစီမံကိန်းတွေက သိုဝှက်ထားတဲ့ ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှု့တွေရဲ့ အကြောင်းရင်းကလဲ ဒါတွေကြောင့်ပါပဲ ပိုပြီး ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာက ဌါနတွင်း ၀န်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စတွေမှာ ကုမ္ပဏီတွေက ပါဝင် စွက်ဖက်ချယ်လှယ်နေကြတာပါပဲ အထူးသဖြင့် အေးရှားဝါး (ဟိုက်တက်၊အမ်အက်စ်ပီ၊ မင်းအနော်ရထာ) စတဲ့ ကမ္ပဏီတွေ အရေးကြီးတဲ့ ရာထူးနေရာတွေ ဥပမာ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုပေးနိုင်တဲ့ ရာထူး၊ ငွေရေးကြေးရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ ရာထူးနေရာ ပစ္စည်းဝယ်ယူတင်သွင်းပေးနိုင်တဲ့ ရာထူးနေရာတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အရာထမ်းတွေ တိုးမြှင့် ခန့်ထားရေး အတွက် ၀န်ကြီးကို ငွေပေးပြီး တွန်းအားပေးကြတာ အလွန်ရုပ်ပျက်လှပါတယ်။ ၀န်ကြီးကလဲ ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ပေးကမ်းမှုတွေနဲ့ သူ့မိသားစု စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်နေတော့ သူတို့ ခိုင်းသမျှ လုပ်နေတာပေါ့။ အထူးသဖြင့် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း(ရ)ခု အတွက် ကော်မရှင်တွေ ပေးထား၊ သူမိသားစု သူ့သားသမီးတွေအတွက် အိမ်တွေ ဆောက်ပေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ထူထောင်ပေးထားတဲ့ ဦးထွန်းမြင့်နိုင် ခိုင်းသမျှ မြေ၀ယ်မကျနာခံပြီး လုပ်ပေးနေတာ ကျနော်တို့ ၀န်ထမ်းတွေ အတွက် ရင်နာစရာပါ။ ၀န်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ ခန့်ထားတဲ့ အရာထမ်းတွေကလည်း ဌါနအတွက် ပစ္စည်းဝယ်ရင် ၀န်ကြီးသား အကြီးရဲ့ ကုမ္ပဏီ(COSY ကုမ္ပဏီ)က၀ယ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုရင် သားအကြီးရဲ့ (ရွှေဝါလှိုင်-ကုမ္ပဏီ)ကိုအပ်၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံမယ်ဆိုရင် သားအကြီးရဲ့ (COSY-ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့ဇွဲမာန်-ကုမ္ပဏီ)ကို အပ်၊ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင် သားအကြီးရဲ့ (ဂရိတ်မိုဘိုင်း-ကုမ္ပဏီ)က၀ယ်၊ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား လက်မှတ်ဆိုရင် သမီးတော်ရဲ့ ကုမ္ပဏီက၀ယ်၊ ကျမ်းမာရေးကိစ္စဆိုရင် သားအငယ်ရဲ့ မြတ်သုခ ဆေးတိုက်မှာပြ ဆိုပြီး အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေကို ညွှန်ကြားတယ်။ ၀န်ကြီးသား အငယ်မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကလဲ တယောက်ကို အနည်းဆုံး ၅ သိန်း လက်ဖွဲ့ရမယ်လို့ အရှက်မရှိညွှန်ကြာါး်ခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းကြီးတွေ ဆိုရင် အေးရှားဝါးကို အပ်ရတယ်။ အခြား (ဟိုက်တက်၊ အမ်အက်စ်ပီ၊ မင်းအနော်ရထာ) ကုမ္ပဏီတွေကိုလဲ လက်ဝါးချင်းရိုက် လုပ်စားကြသေးတယ် ကြာတော့ ၀န်ထမ်း်လောကကို စိတ်ကုန် စိတ်နာလာပါပြီ သမ္မတကြီးကို လေလှိုင်းက တဆင့် ပြောပေးပါ။ ကျနော်တို့ မိသားစုတွေကို ဒုက္ခမပေးဘူး ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒပြခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ဒီမတရားမှုတွေ ခြစားမှုတွေကို ရုံးအမှတ်(၃၈)ရှေ့မှာ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင် ဆန္ဒပြခွင့်ပြုပါ ပြီးတော့ အဖြစ်အပျက်အမှန်တွေကို ပြောပြချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကို လာစစ်ပေးပါ။ (ဒုသမ္မတ(၁)ကိုတော့ မပြောချင်ဘူး၊ သူက ၀န်ကြီးနဲ့ အလိုတူ အလိုပါ မို့ပါ)။ ပေးစာ(၂) – မြစ်ဆုံကို မျက်လှည့်လုပ်ထားတဲ့ ချီဖွေစီမံကိန်းကို တားပေးပါ ကျနော်ဟာ လျှပ်စစ်(၁)မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှုးတဦးပါ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက ကျနော်တို့ ဌါန ကျနော်တို့ အစိုးရရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ ၊ ပြည်သူကို နားလှည့် ပါးလှည့်လုပ်၊ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ တရုတ်တွေနဲ့ လက်ဝါးခြင်းရိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ၊ (၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁) နေ့မှာ လျှပ်စစ် (၁) အေးရှားဝေါလ်ဒ်နဲ့ စီပီအိုင် (တရုတ်)တို့ ချီဖွေ စီမံကိန်းကို ဒီဇင်ဘာမှာ စတင်အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်။ (၁၅.၁၂.၁၁)ညနေ(၇)နာရီမှာ ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းအမိန့်နဲ့ ညွှန်ချုပ်ဦးကြီးစိုး က သူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ (၁၆.၁၂.၁၁)နေ့မှာ ဒုသမ္မတ(၁)နဲ့ ဒီစီမံကိန်းကိစ္စကို တနေ့လုံး အကြေအလည်ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်သူတွေကို လုံးဝချမပြပါဘူး။ သတင်းစာမှာလဲ မဖေါ်ပြပါဘူး။ ကျနော်တို့ အတတ်ပညာရှင်တွေကိုတောင် အသိပေးဆွေးနွေးခြင်း မပြုခဲ့ပါဘူး။ ငါသိတယ်၊ ငါတတ်တယ်၊ ငါကော်မရှင်ယူပြီးသား၊ ငါလုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်၊ ပြည်သူ သဘောတူစရာမလိုဘူး … ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ တကယ်တော့ ချီဖွေစီမံကိန်းဆိုတာ စီမံကိန်းအသစ်မဟုတ်ပါဘူး မြစ်ဆုံ မြစ်ညှာ မြစ်ဝှမ်း စီမံကိန်း ထဲက (၁)ခုပါ။ ဒီစီမံကိန်းက သမ္မတကိုယ်တိုင် ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေငြာထားတာပါ မြစ်ဆုံရဲ့ အထက် မိုင်(၆၀) အကွာ မေခမြစ်ပေါ်မှာ ရှိပြီး မဂ္ဂ၀ပ် (၃၄၀၀) ထုတ်မှာပါ။ စာချုပ်စည်းကမ်းတွေကတော့ အရင်စာချုပ်ထဲက အတိုင်းပါ။ မြစ်ဆုံ မြစ်ညှာ မြစ်ဝှမ်းစီမံကိန်းထဲက တခုဖြစ်တဲ့ မြစ်ဆုံစီမံက်ိန်းမှာ စိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ငွေပမာဏကို ကျန် (၆) ထဲ ခွဲထည့်လို့ငွေစာရင်းအရ ပြောင်းသွားတာပဲ ကွာပါတယ်။ ပြည်သူလူထု သိသွားလည်း မြစ်ဆုံကို လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ချီဖွေကို လုပ်တာပါဆိုပြီး မလှိမ့်တပတ်နဲ့ လိမ်ညာ မုသားတွေ ပြောဦးမှာပါ။ ပြည်သူတွေ မသိရင်တောင်မှ တာဝန်သိ ၀န်ထမ်းတွေ ရှိသေးတယ် ပြည်သူကိုလည်း အသိပေးဦးမယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ သမ္မတရပ်ခိုင်းတာ ဒီမြစ်ဆုံ မြစ်ညှာ မြစ်ဝှမ်း စီမံကိန်းကြီး တခုလုံးပါ မြစ်ဆုံလေးတခုတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ချီဖွေကို လုပ်ရင်လည်း လူမှု့ရေးရော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရော ထိခိုက်ပျက်စီးမှာပါပဲ။ အဲဒီနယ်က လူမျိုးတွေရော သယံဇာတတွေရော အကုန် တရုတ်က သိမ်းမှာပဲ ထွက်လာမည့် လျှပ်စစ်ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပဲ အေးရှားဝေါလ်ဒ်း ဦးထွန်းမြင့်နိုင်၊ ဦးဇော်မင်းနဲ့ ဒုသမ္မတတို့ မိသားစု ကော်မရှင်ရ ကောင်းစားရေးအတွက် ကချင်လူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည် သယံဇာတတွေရင်းလိုက်ရတာပါပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးကို ပြောပေးပါ။ ဒီကိစ္စ ပွင့်လင်းစွာ ပြည်သူကို ချပြပေးစေလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ အတတ်ပညာရှင်တွေကို ကြေညက်စွာ ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုသာ ကြည့်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်သူ အဆင့်ဆင့်ကို သန့်ရှင်းကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချု့ပ်မှု့ မျိုး ဆောင်ရွက်တတ်အောင် လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပညာပေးစေလိုကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်။ ပေးစာ (၃) – မသန့်ရှင်း ညစ်ပတ်သော အစုိုးရ၀န်ကြီးများကို ရှင်းလင်းပေးပါ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် တင်ပြ ဆွေးနွေးသင့်သော အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်း ၀န်ကြီးတချို့နှင့် အရာရှိကြီး တချို့၏ အကျင့်ပျက် ခြစား၍ တရားမ၀င်ရရှိထားသော တရားမ၀င်သည့် ၀င်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုများကို စိစစ်သင့်ပါသည်။ ဥပမာ လျှပ်စစ်(၁)၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းသည် ဘိန်းဘုရင် ထွန်းမြင့်နိုင်၏ ဘိန်းဖြူလုပ်ငန်းမှ ရရှိငွေ ငွေမဲများမှ တဖက်လှည့်ဖြင့် ပံ့ပိုးမှု့ ရရှိထားခြင်း မြစ်ဆုံ မြစ်ညှာ မြစ်ဝှမ်း စီမံကိန်း(၇)ခုနှင့် သောက်ရေခပ် စီမံကိန်း အကျိုးအမြတ်အတွက် ဒု သမ္မတ (၁) အပါအ၀င် ကော်မရှင်(၁၀.၅)ရာခိုင်နှုန်းအား ရယူထားခြင်း၊ လျှပ်စစ်(၁) JV စီမံကိန်းများအတွက် MOU အဆင့်မှာ (၇)ရာခိုင်နှုန်းအား စီမံကိန်းများ အတွက် ညွှန်ချုပ်ဦးကြီးစိုးထံမှ တဆင့်လက်ခံ ရယူထားခြင်း။ MOU အဆင့်မှာ (၅)ရာခိုင်နှုန်း ရယူခြင်း၊ JV ကုမ္မဏီ ထူထောင်ခွင့် အဆင့်တွင့် ထပ်မံ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်း ရယူထားခြင်းများအား ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌါန အရာရှိအပိုင်းမှတဆင့် သတင်း တိကျစွာ ရရှိထားပါသည်။ ဦးထွန်းမြင့်နိုင်မှ ပံ့ပိုးပေးပုံပေးနည်းမှာလည်း သိမ်မွေ့လှပေသည်။ နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိတွင် နန်းတော်ကြီးပမာ ခန်းနားလှသော အိမ်တော်ကို ဆောက်လုပ်ပေးထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့တာမွေ မေတ္တာရိပ်မွန်တွင် ဦးဇော်မင်းအတွက် ခြံကျယ်ကြီးနှင့် အိမ်ကြီးတလုံး ၊ သားကြီး ဒေါက်တာ အာကာဇော်၊ သားငယ် ဒေါက်တာ လင်းထက်အောင် ၊ သမီးရတနာ ဇော်မင်းတို့ အတွက် အပျံစား အိမ်တလုံးစီ ဆောက်လုပ် လက်ဆောင်ပေးထားပါသည်။ သားကြီး အာကာဇော်အတွက် Great Mobile ဖုန်းဆိုင်ကိုလည်း ရင်းနှီးထုတ်ပေးထားပါသည်။ သားငယ်ဒေါက်တာ လင်းထက်အောင်အတွက် နေပြည်တော် ဇီဝက ဆိုင်တန်းတွင် မြတ်သုခ အမည်ရှိ ဆေးတိုက်ကြီးနှင့် Health Club Fitness Centre အား ရင်းနှီးမတည်ဖွင့်လှစ် ပေးထားပါသည်။ သမီးရတနာဇော်မင်းအတွက်လည်း ရန်ကုန်ဆူးလေအနီးတွင် နိုင်ငံခြားခရီးသွား ကုမ္မဏီကြီးတခုကို ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါသည်။ သားကြီး ဒေါက်တာအာကာဇော်၏ COSY ကုမ္မဏီအတွက် စက်ယာဉ်ယန္တရားကြီး (၂၆)စီး အား မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း (ရ)ခုနှင့် သောက်ရေခပ် စီမံကိန်းအတွက် စာရင်းပြ၍ ရောရောင်တင်သွင်းပြီး အပြီးလက်ဆောင်ပေးထားပါသည်။ ဦးဇော်မင်း မိသားစုသို့ ပံ့ပိုးပေးသည့် ငွေကြေးများအား သောက်ရေခပ်စီမံကိန်းတွင် ကျောက်လုပ်ငန်း အပေးပြလျှက် သားကြီး အာကာဇော်၏ COSYကုမ္ပဏီမှ တဆင့် လစဉ် သိန်း (၂၀၀၀) မှ (၄၀၀၀) အကြား လုပ်အားခအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးပေးနေသော အခြားကုမ္ပဏီများလည်းရှိပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဘိန်းဖြူလုပ်ငန်းများမှ ရရှိထားသော ငွေမဲများအား ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ထံမှ လွယ်ကူစွာ လက်ခံရယူထားသော ဦးဇော်မင်းနှင့် ဒု သမ္မတ(၁)တို့ အပေါ်တွင် SANCTION ပိတ်ဆို့မှု့ကို ဖွင့်လှစ် မပေးသင့်သလို စိစစ်အရေးယူ သင့်ပေသည်။ ၀န်ကြီးဌါနတွင်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှု့များကိုလည်း လျှပ်စစ်(၁)၀န်ထမ်းများမှ တဆင့် နားမဆံ့အောင် ကြားနေရပါသည်။ ဥပမာ-တနင်္လာရီတိုင်း ဆလုံ တိုင်းရင်းသား ကျွန်းသူကျွန်းသား တရွာလုံးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် သတ်ဖေါ် သတ်ဖက် တပည့်များအား လျှပ်စစ် (၁) ဌါနအတွင်း ရာထူးနေရာကောင်းကောင်း မြင့်မြင့်များ ပေးထားခြင်း၊ ၀န်ထမ်းရေးရာ ရာထူးတိုးမြှင့်မှုများတွင် ငွေများစွာ ရယူ၍ မတန်မရာ ရာထူးများအား မတန်တဆ မတရား တိုးမြှင့်ပေးထားခြင်း၊ စစ်ဘက်မှ ကူးပြောင်းလာသော ၀န်ထမ်းများအား အရပ်ဘက် နဂိုရှိပြီး ပညာရှင် ၀န်ထမ်းများထက် အခွင့်အရေးပိုမိုပေးပြီး ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံသလို ပညာရျင်များကိုလည်း တန်ဖိုးမထားခြင်း၊ ၀န်ကြီးဌါနအတွက် ခွဲဝေရရှိသော အမျိုးအစားကောင်းမွန်သည့် မော်တော်ယာဉ် အစီး(၃၀) ကျော်အား လက်အောက်အရာထမ်းများအတွက် ခွဲဝေပေးခြင်း မရှိပဲ ၀န်ကြီးသုံး အရန်ယာဉ်များ အဖြစ် မောင်ပိုင်စီးထားခြင်း နှင့် အဆိုပါယာဉ်များအတွက် ခွဲဝေရသည့် စက်သုံးဆီများအား ရုံးအဖွဲ့မှုးမှ ရောင်းချ၍ ကိုယ်ကျိုး အတွက် သိမ်းယူခြင်း၊ ၀န်ကြီးအဆင့်မှ မတရားမှုများ ရှိနေတော့ အောက်က စစ်ဘက်အရာထမ်း များကပါ လိုက်လံ အတုခိုး အကျင့်ပျက်ခြစားလာသည်မှာ နေပြည်တော် အထက် ပေါင်းလောင်းနှင့် နန်ချို စီမံက်ိန်းများမှ စက်သုံးဆီ ဘိလပ်မြေ သံချောင်းလုံးများစွာ အသုံးပြု၍ နေအိမ်တိုက်တာများ ဆောက်လုပ်နေကြသည်မှာ မြင်မကောင်းအောင် ဖြစ်နေပြီး တိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာငွေ မြောက်များစွာ လေလွင့် ဆုံးရှုံးနေကြောင်း ဓါတ်ပုံနှင့် စာရင်း အထောက်အထားများအရ သိရှိရခြင်း၊ ၀န်ကြီးဌါနစီမံကိန်း မှန်သမျှ၏ စီမံကိန်းပစ္စည်း အားလုံးကိုလဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း သားကြီး အာကာဇော်၏ ရွှေဝါလှိုင် သယ်သူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီကပဲ သယ်ယူဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး ဈေးနှုန်းကြီးမြင့် သလို ပျက်စီးမှု့ဖြစ်လာရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းကသာ ဖြေရျင်းရခြင်း ၀န်ထမ်းများ ၀တ်ဆင်တဲ့ ပုဆိုး ထမီ အစုတ်ပလုပ်က အစ လုပ်ငန်းကြီးတွေ အထိ လက်ဝါးကြီးအုပ် မတရားရယူပြီး ဌါနကြီးတခုလုံးရဲ့ ဘတ်ဂျက်တခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီး တသက်စာ စားမကုန်အောင် ရှိနေ့ရက်နဲ့ ထပ်၍ ထပ်၍ လောဘဇော်တိုက်နေတဲ့ ဒီလိုဝန်ကြီးမျိုးတွေ ဟာ Clean Government Good Government လို့ အော်နေတဲ့ သမ္မတကြီးနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အချို့ဝန်ကြီးများမှ စိစစ်ဖေါ်ထုတ် ဟန့်တားသင့်ပါသည်။ နေစဉ်ရုံးတက်နေရတဲ့ ၀န်ထမ်းများကိုတောင် ရုံးရဲ့ အလယ်ဝင်ပေါက်က ၀င်ခွင့်မပြုပဲ ၀န်ကြီးနဲ့ ညွှန်ချုပ်များသာ ၀င်ခွင့်ပြုထားတာဟာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကို တရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံပြီး လူဂုဏ်သိက္ခာကို ချိုးဖဲ့သလို ခံစားနေရကြောင်း၊ လျှပ်စစ် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေအဖို့ အလုပ်ကို ညအချိန်မတော်အထိ အနိုင်ကျင့်စေခိုင်းတာ ခံနေရပြီး ရာထူးဝင်ငွေ ပျော်ရွှင်မှု မိသားစု အရသာ ဘာမှ မျှော်လင့်ချက်မရှိ ဘ၀တွေပျက်နေရကြောင်း ရင်ဖွင့်တာကို စိတ်မကောင်းစွာ ထပ်တူ ခံစားရပါသည်။ ဒီလို အဖြစ်ပျက်မျိုးတွေ အခြားဝန်ကြီးဌါနတွေမှာလည်း( ဥပမာ စည်ပင်သာယာလို ဆောက်လုပ်ရေးလို စီပွားကူးသန်းလို အကောက်ခွန်လို) ရှိနေနိုင်တာမို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ထံ(သို့) လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီးထံသို့ ယင်းဌါနများအား ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာစုံစမ်း၍ ထိရောက်စွာ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ပြုပြင်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြု တင်ပြ အပ်ပါသည်။ လွှတ်တော်နဲ့ အစုိုးရကို ”ဖွတ်” မတက်ပါစေနဲ့ခင်ဗျား။
အနောက်မီဒီယာ၊ သူ.ဖေါက်သည် ဘင်ဂါလီ။ ဂရမ်မီဆု လုံးလုံး မရစေရ။
Western Media ought not to win Grammy in serving its client-Bingalis
by Aye Aye Soe Win on Thursday, August 2, 2012 at 1:16pm ·
သြစထေးလီးယား က တီ ဗွီ တခု ကပါ ဒီ နေ. ဖီးချား သတင်း ခေါင်းကြီး လုပ်ပြီး ဒီ စိတ်ကုန်စရာ ကောင်းတဲ. ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ကို ဒီ နေ. ပဲနား မသက်သာအောင် ကြေငြာပြန်ပါတယ်။ သတင်းကြေငြာသူတိုင်း က ခု ရခိုင် ပြည်နယ်က ဘင်ဂါလီ ရိုဟင် ဂျာတွေ ကို ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အမေ.ခံနေရတဲ.၊ အနှိပ်စက်ခံ ရ ဆုံး လူသားတွေ ဆိုပဲ။ ဘယ် အချက်အလက်ကြောင်. ဒီ လို ပြော သလဲ ဆို တလော က ဗြိတိသျှ ချန်နဲလ် များ က ပြောတဲ. အတိုင်း ပဲ တလေ ထဲ ပြော သွားတာ ပါ။ နောက်တခုက အမေရိက က တိုင်းဝါနာ အုပ်စုပိုင် မ၀ဲတ၀ဲ ဟတ်ဖင်တန် ဘာသာရေး သတင်းစာက Buddhists Monks Against Humanitarian Aid? ဆိုပြီး စနေပြန်ပါပြီ။
ဒါမျိုးတွေ ခုတလော နေ.တိုင်းတွေ.နေရပါတယ်။ အနောက်ဖက်အခြမ်းက မ၀ဲတ၀ဲ တွေ၊ လူ.အခွင်.အရေးသမားတွေ၊ အန်ဂျီအိုတွေ နဲ. ဆော်ဒီက ပိုက်ဆံတွေ ခွန်.ထားလို. အသံလွှင်. မိုက်ကရိုဖုန်းတွေကိုင်ပီး မိုက်ရိုင်းနေကြတဲ. ပြည်ပမြန်မာဘာသာမီဒီယာက သူတွေက ဘာမှ မြန်မာတွေ နစ်နာတဲ.ဖက်က စာစာနာနာ မသုံးသပ်ပဲ၊ ဘင်ဂါလီအရေး တခုထဲတင် တဲ. လုပ်ကွက်တွေရယ်။ မြန်မာ အစိုးရ ပေါလစ်ဗြူရိုက လူကြီးတွေ ရယ်။ နိုင်ငံရေး ဂျီးနီးယပ်စ် ဆု ကို တခု စီ ပေး လိုက် ချင်ပါတယ်။ ပူးတွဲပြီးဒီဆုကိုပေးလို. မရပါ။ ရလိုမှုတွေက ဒီ၂ ဘက်မှာ မတူတော.- ဂျီးနီးယပ်စ်ဖြစ်တာချင်းတူပေမဲ.- ဆုကိုတော. တ၀က်စီခွဲပေးလို.မရပါ။
တခုတည်းသော မက်ဆေ.ခ်ျကို မှားမှားမှန် မှန် ထပ်ကာတလဲလဲ လုပ်ကြံတင်ဆက် ခြင်း ရဲ. အကျိုး တွေ ၀ါဒဖြန်.သူတွေ ဖက်မှာ ရှိပါတယ်။ ခဏခဏ ဖတ်ပါ ကြားပါ များ လာ ရင် ဒါ ကို ပဲ အမှန် ထင် လာပြီး- ဒါကိုပဲ နိုင်ငံရေး အရ အသည်းအသန် ဆွေးနွေးရမဲ. အရာလို ဖိအားပေး သတ်မှတ်ပြီး စစ် အစိုး ရ လက်အောက်မှာ လုံးဝမလှုပ်နိုင်တဲကြားက၊ ခုတော.--၊ နူရာ ၀ဲ စွဲ လဲ ရာ သူ ခိုး ထောင်း ဆိုသလို တပ်ခါတလဲလဲ ခံ ပြီး ရင်းခံနေရတဲ. မြန် မာရခိုင်တွေ ကို နိုင်ငံခြားသားအဖြူတွေ က လူ. အခွင်.အရေးခေါင်းစဉ်နဲ.၊ အကြိမ်ကြိမ် ထိုးကျွေးဖို. အကွက်စေ.စေ. လုပ်နေကြတာပါ။ သူတို.ဖက် က(ဘက် ၂ဘက်စလုံးက) အမြတ်ထုတ် ချင်တဲ. ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကို တတိုင်းပြည်လုံး ဆန္ဒပြသင်.တယ်။
၁၉၈၈ ကစ လို. ခုထိ ၂၄ နှစ် လုံးလုံး ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ဖိအားပေးပေး စစ် အစိုး ရ ဟာ ပြည်သူလူထုအတွက် မက်လောက်စရာ ဘာမှ လုပ်ပေးခဲ.တာမဟုတ်ပေမဲ.၊ ခုလိုအနည်းငယ်ပွင်.လင်းစရာသီမှာ ရခိုင်တွေခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရ။ ကုလားကိုကြောက်ရ။ ယူအန်ကိုကြောက်ရ၊ ယူအက်စ် ယူကေ ကို ဂရုစိုက်ရ၊ အန်ဂျီအိုတွေ ကို သူတို.စကားအတိုင်းဖြေရှင်းနေရ၊ စစ်တပ်နဲ. လ၀က ပေါင်းပြီး လပ်စားမှုက တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာတဲ. ဒီပြဿနာကို --ခုမှ ဒီ မိုကရေစီ အမည်ခံ လူ.အခွင်.အရေးအမည်ခံပြီး-- အားလုံးကြောက်ပြီးထွက်ပေါက်မရှီလို.--ဘင်ဂါလီ ကိစ္စကို ရေပိုင်နက်လုတုန်းကလို အလျှော.ပေးလိုက်ရရင်--နှစ်၅၀ စစ်ကျွန်ဖြစ်ခဲ. ရတဲ. မြန်မာတွေ၊ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေ ရဲ. အသေအကြေခံပြီး ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုအားလုံးရဲ. ဆုလဒ်က ဘာပါလဲ။
ခုလူလည် ကျနေတဲ. ခရစ်ယန်အုပ်စုတွေရဲ. Massive media campaign က သတင်းစာမျက်နှာတိုင်းမှာတက်လာပါပြီ။ တိုးတက်သော မြန်မာ ၊တိုင်းရင်းသား ပညာတတ်တွေကိုမုန်းပြီး၊ ပြဿနာတက်လာရင် ခွေးအကြီးလည်နင်သလို နဲ. အမြဲ မမှန်မကန်ပြောခဲ.တဲ. စစ်အစိုးရဖက်က ဒီဂွင်ဆိုက်အောင် တမင်လုပ်ခဲ.တာမို.၊ ခု မထိန်းနိုင်အောင် အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင်ပြီ။ သို.သော်- သူတို.တွေ အမှန်တခါပြော ခဲ. တောင် ဘယ်သူမှ မယုံ။ ကျားကျား မဟုတ်ပဲနဲ.ခြောက်ပါများပြန်တော. တကဲ.ကျားရောက်တော. တရွာလုံးကျားအစစ်ကြောင်.သေရသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟိုရှောင်ဒီရှောင်လုပ် ပြီး မတရားမှု မှန်သမျှ ကို တရားဝင် ၀န်မခံ ရဲ၊ တာဝန်မယူရဲပဲ၊ ရခိုင်တွေ ပြေးရင်၊ ရခိုင် က ရှိတဲ.မြေတွေ ကို ဦးခင်ရွှေတို.လို၊ အလားတူ အတန်းအစားတွေက ဦးရွှေ မန်း ပါဝါနဲ.၊ ဘင်ဂါလီ ကုလားပွဲစားတွေ နဲ. ပေါင်း ပြီး စီးပွားဆက်ရှာ တိုင်း ပြည် ကို နင်း ချ ဖျက်ဆီးကြမယ်ဆိုရင် လည်း- ဝေ.လည်လည် လုပ်နေတဲ. အစိုးရ က တတိုင်းပြည်လုံး လမ်းပေါ် ရောက်အောင် ရှိတဲ. တချပ်ကို ဆက်မှောက်မထားပဲ တခါထဲ ထုတ်ပြလိုက်ပါတော.။
တရားမ၀င် ၀င်လာတဲ.သူတွေ ကို တရားမျှမျှတတ စစ်ဆေးပြီး လူဝင်မှု နည်းဥပဒေအရ လုပ်မယ် ဆိုလည်း အစိုး ရ က မလုပ်ရဲပြန်ဘူး။ ခု ပြည်ပမီဒီယာ အထူးသဖြင်.၊ အရှေ.အလယ်ပိုင်းမှာ-- အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံတွေ ကို နည်းမျိုးစုံနဲ. နှံထားတဲ. အဖြူ နိုင်ငံတွေ က-ခရစ်ယန်ဂရု တွေကပါ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စစော်ကားနေပါပြီ။ ကလိန်ကကျစ်နည်းတွေ နဲ. ခု ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ကပဲလူဆိုး တွေ ဖြစ်နေသလိုပုံစံ ကြေငြာပြီး၊ မြန်မာဘုန်းကြီးတပါး ဒီကိစ္စ ဗုဒ္ဓ ဘာသာရေး အမျိုးသားရေးမို. NO ROHINGYA ဆိုင်းကို ကိုင်ထားတဲ. ပုံ တပုံကအစ ခု အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ မျက်နှာ ဖုံး သတင်း ဖြစ်နေပြီ။ ဒီလို ဆန္ဒပြတဲ.ပုံမျိုး ကို ပညာသားပါပါသုံးပြီး အမေရိကန်သတင်းစာတွေကပါ ယူကေ က သတင်း စာတွေကို ကိုးကားနေလေတော. မြန်မာတပြည်လုံးရဲ.ဒီမိုကရေစီိရေးက ခု ဂျောင်ကပ်နေပါတယ်။
သန်း၆၀ ဘ၀ပျက်နေတာ ဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူး။ ဒါပေမဲ.-- လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာ ပင်မအစိုးရနဲ. အတိုက်အခံ တွေ ကြားမှာ နှစ်တွေအများကြီးကြာမှအသီးအပွင်.ရမဲ.၊ ကြားနေ လို.ကောင်းတဲ. ခေါင်းစဉ် အာဂျန်ဒါဖြစ်တဲ. ပညာရေး ဆိုတာတွေမှာပဲ၊ အာလူးကောင်းနေဆဲ။ ခု- ဒီ ဘင်ဂါလီ အရေး က သိပ်ဟော.တ်နေ ပြီး ကမ္ဘာ.သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ ပေါက်ကွဲထွက်လာတယ်။ ထာဝရမတရားလုပ်ခဲ.တဲ. စစ်အစိုးရကို ဘုရားက ရိုက်ဖို.၊ကုလားစားရဖို. ဒီ အဖြစ်ကြုံလာရတယ်လို.လည်း --မြန်မာပြည်သားတွေက မိမိ ကိုယ်မိမိ သားကောင် အဖြစ် အယူသည်းပြီး မစဉ်းစားကြပါနဲ.။ ဒါကို ပြဿနာ အဖြစ် ကြေငြာနေကြတာတွေဟာ မိုက် ရိုင်းလွန်းအားကြီးတဲ. အတွက် ရခိုင်ပြည် ကုလားမြိုနေတဲ. ကိစ္စကို လူတွေလမ်းပေါ်ရောက်အောင် တမင် လုပ်နေကြသလားထင်မိတယ်။
ကျောင်းသားတွေ အများကြီးသေဖူးတယ်။ မဆန်းဘူး။ ဘုန်းကြီးတွေ အများကြီးသေဖူးတယ်။ မဆန်းဘူး။ လူမျိုးစုတွေ သေတာမှသောက်သောက်လဲ။ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ အများကြီး။ ဆန်းတာက နှစ်၅၀ စစ် ကျွန် ဘ၀လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲမှာ- ပထမဆုံး ဆုရမဲ.သူ က မြန်မာ အစိုး ရ လား၊ ပြည်ပက မီဒီယာ နဲ. လူ. အခွင်.အရေးသမားတွေလား။ အစ္စလမ်ကမ္ဘာကို မျက်နှာ လုပ်မဲ. လူဖြူအစိုးရတွေ ရဲ. ကွက်ကျော် စီမံကိန်းတွေလား။ သနားစရာ (တကယ် ကမ္ဘာကြီးက လုံးလုံးမေ. နေကြတဲ.) ဒုက္ခသည် ဘင်ဂါလီတွေလား။ ဘင်ဂါလီ ကုလားတွေ အနှိပ်စက်ခ့နေရ၊ အမေ.ခံနေရတယ်ဆိုရင်၊ နှစ်၅၀ ခံ ခဲ.ရတဲ. မြန်မာတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ကို ဘယ်လို စကားလုံး ဘယ်လို ကိန်းဂဏန်းနဲ.ဖေါ်မလဲ။ ဘယ် စာရင်းထဲမှာ ထားသင်.သလဲ။
(ခုမှ-ကုလားတွေကို အထူး မျက်နှာသာပေးပြီး) မြန်မာ အစိုး ရ လုပ်သမျှကို တချိန်က စာရွက်နဲ. ကန်.ကွက်ခဲ.တဲ. အနောက်အုပ်စုက မြန်မာပြည်သူတွေ သက်သာစေဖို. လည်း အရင်တုန်းက ဘာမှ လက်တွေ.ကျကျ ထိရောက်စွာ မလုပ်ပေးခဲ.ပါ။ မြန်မာတွေဒုက္ခကို လှည်.တောင် မကြည်.ခဲ.တဲ. ကမ္ဘာက လူလည်တွေက ၊ခုမှ- လူဝင်လူထွက်များလာမှ- ပထမ ဆုံး ကမ္ဘာက မြန်မာပြည်အပေါ် ဆုချမဲ. လူ.အခွင်.အရေးတိုက်ပွဲ ရလဒ်က အနှိပ်စက် ခံနေရတဲ.၊ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ နှိမ်တာ လှိမ်.ခံနေရတဲ. ရိုဟင်ဂျာတဲ.လား။
ဒီ လို အမြတ်ထုတ်ခြင်းအပေါ် အခွင်.အရေး ရ မဲ. သူတွေ က ရခိုင် ပြည် နဲ. ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ကို မြွေ လို တဖြည်းဖြည်းမြိုမဲ. အရေးကို ကြိုသိတယ်။ ဒီ လို အမြို ခံရအောင်ကို လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ရပ် ကြည်.မနေပါနဲ.။
အစ္စရေး နိုင်ငံနယ်နမိတ် ကို အနောက် ကမ္ဘာ က အသိအမှတ် တရားဝင် မပြုခင်က အဲ ဒီ. ဒေသ မှာ မူဆလင် ဦးရေ က အများကြီး ပို များပါတယ်။ ၁၉၀၀ မတိုင်ခင် က အဲဒီ မှာနေတဲ.ဂျူး ဆို လို. မူးလို. ရှုစရာ မရှိအောင်နည်းပါးပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၄၈ ၁၉၄၉ လောက် ကျမှ ဟိုလိုကော.စ် အရှိန်နဲ. အစ္စရေးနိုင်ငံတော်စပေါ်တဲ. အချိန်မှာ ဂျေယုစ လင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဂျူး၂ သောင်း ကျော်ကျော်သာသာ စရှိခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ.--အနောက် ကမ္ဘာ က တဖြည်းဖြည်း တောင် မဟုတ်၊ အရမ်းးကို ဂျူးတွေထွန်းကားစည်ပင်ရေး အတွက် အားပေးပြီး ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီး ကတည်းက အလုပ်ဖြစ်စေခဲ.တာ၊ အစ္စရေး နိုင်ငံတော် ထွန်းကားရေး မှာ၊ အစ်စလမ်တွေ ကို တိုက်၊ ဖိအားပေး၊ ဒီလို ဖိအားအပေးကောင်း လိုက် တာ---ခု--သမိုင်းကတော.လူတိုင်းသိကြတဲ. အတိုင်းပါပဲ။ ၁၉၆၇ အထီ အစ္စရေး မှာ ဂျူး ဆို ကြိုး တို. ကြဲ တဲ ပါ.။ ၁၉၆၇ လဲ ရောက် ရော--- ၂သိန်းကျော်ကျော်။ ၁၉၇၀လည်းကျော်ရော--ဂျူး လူဦးရေ က အဆမတန်ထိုးတက်။ခု ၈ သန်းနီးပါး-၆သန်းက ဂျူး- မူလအစ္စလမ် မစ်ခ် လူမျိုး တွေ က မိုင်နော်ရတီ လူနည်းစုဖြစ်သွားပါတယ်။
ကုလားတွေ လူဦးရေ ပေါက်ဖွားမှုများတဲ. နိုင်ငံတွေရဲ. အဓိကပြဿနာက သူလူဦးရေကိူ သူ.အစိုးရတွေတောင်ပြန်မထိမ်းနိုင်ပဲ ၊ စည်းမဲ.ကမ်းမဲ. ကျူးကျော်လေ.ရှီတဲ. ယဉ်ကျေးမှုပါ။ အနောက်မှာ တချိန်က အနှိမ်ခံ (၀ါ) အခွင်.ထူးခံ ကမ္ဘာ.ဂျစ်ပ်စီ ဖြစ်ခဲ.တဲ. ဂျူး တွေ ရဲ. ယဉ်ကျေူးမှုနဲ. မြန်မာပြည်ကို ခိုးဝင်နေ ထိုင်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ. မြန်မာပြည်ကလူမျိုးစုပါလို.အော်နေတဲ. ဘင်ဂါလီတွေ ရဲ. ယဉ်ကျေးမှုက တခြားစီပါ။ ချမ်းသာတဲ. အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေ ကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း နည်း အမျိုးမျိုး သုံး ၀င်တိုက်ခဲ.တဲ. အနောက် က အဖြူ အစိုးရတွေဟာ--အစ္စလမ် အသိုင်းအ၀ိုင်းကို မျက်နှာ လုပ်ဖို.- ပြားချပ်နေအောင် ခံပြီးရင်းခံနေရတဲ. မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေကို အသုံးမချသင်.ပါ။ မြန်မာ ပြည်ကို ထိုးမကျွေးးသင်.ပါ။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိပြီး အနာဂါတ် ပြဿနာတွေကို ကြီုတွေးနိုင်တဲ. မြန်မာပြည်သားတွေ တိုင်းရင်းသားတွေက လည်း အားလုံးကို ညှင်းဆဲခဲ.တဲ. မြန်မာ အစိုးရ လုပ်နေတာတွေကို ငြိမ်ခံမနေကြပါနဲ.။
ဒီမိုကရေစီကျကျ စဉ်းစားပေးသလိုလိုအပေါ်ယံဟန်ဆောင်ပြီး--- မတရားသဖြင်. ၀င်စွက်ဖက်ချင်တဲ.၊ ဖဲချပ်များတဲ. ဗြိတိသျှ မီ ဒိယာနဲ. နော်ဝေ ဒီဗွီဘီ က ဟန်ယောင်ငွေ အုပ်စု ၏ယုတ်ညံမှု၊ နေပြည်တော်က အပွင်.ကြီးများ လပ်စားမသမာမှု၊ ခု ဘင်ဂါလီ အစ်ရှုး ဘင်ဂါလီ ခေါင်းစဉ်က (ကျန်နေတဲ. နေရာတိုင်း က မတော်မတရား ပျက်ဆီးဖေါက်ပြန်နေမှု တွေ ကို ကျော်ပြီး) ခိုင်မာသွားခဲ.တယ်။
စောင်.ကြည်.ပါ။ မြန်မာ လူမျိုးတွေ ပေါ.ဆခဲ. လျှင်--သိပ်မကြာခင်မှာ- ခိုးဝင်တဲ. ဘင်ဂါလီ ၈ သိန်းက ၈ သန်းဖြစ်။ အစ္စရေးမှာလို ဂျူး၂သိန်း က ၈ သန်းဖြစ်အောင် နှစ် ၄၀ စောင်.စရာ မလို ဖူးနော်။ ရခိုင်မှာဆိုရင်တော. လား--ခု ရေပိုင်နက် ဆုံးထားကာစပဲရှိသေးတယ်။ ခု-ရွှေဂက်စ် စီမံကိန်းက တန်းလန်း-သိပ် မကြာခင် ကျမတို. မသေခင်မှာပဲ-သူတို. ဘင်ဂါလီတွေက -အန်ဂျီအိုနဲ. အင်္ဂံလိပ်အစိုးရ ပရောဂ ၊ အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် မျက်နှာ လုပ်မဲ. အနောက်ကမ္ဘာက လူလည်တွေက -မြန်မာလူမျိုးနဲ.တိုင်းရင်းသားတွေ လူ မျိုး စုတွေ ဘယ်တုန်းကမှ မရ ခဲ.တဲ. လူ.အခွင်.အရေး နဲ. သီးခြားအုပ်ချုပ်ရေးတွေ -ရခိုင်ပြည်မှာ ခိုးဝင်နေသူတွေအတွက် ရိုဟင်ဂျာသီးခြားနိုင်ငံတော် ဖြစ်သင်.ပါတယ်ဆိုပြီး ဖိအားပေး၊ လပ်ထိုးယူသွားပါလိမ်.မယ်။
ဘင်ဂါလီ ၁သန်းနီးပါးက ၅ နှစ် အတွင်း ၅ သန်း ကျော် စေ ရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အကြီးအကျယ် ရင်ကွဲမဲ. အန္တရာယ် မို.--လိုအပ်လာရင် နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ကလေးတွေ။ မိန်းမတွေ။ ဘုန်းကြီးတွေ၊ တိုင်း ရင်းသားတွေ၊ ရှေ.ထွက်လာကြမယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို ဘယ်တုန်းက မှ မထောက်ခံခဲ.တဲ. မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ-ခု ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန်.ကျင်ကြတယ်။ ဘာကြောင်.ဆိုတာ အနောက် ကမ္ဘာက တွက်တတ်ပါတယ်။ ခိုင်းကောင်းတဲ.ပြည်ပမီဒီယာက မြန်မာတွေက လည်း ပေါ်ရာ ခေါင်းစဉ်အတွက် တက်ကြွစွာ အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ. အတွက်-တိုင်းပြည်သိပ်နစ်နာပါတယ်။
ဘယ်လိုနည်းနဲ.ဖြစ်ဖြစ်- ရခိုင်ပြည် ကုလား မမြိုအောင် -သူတို.တင်နေတဲ. အကြံအဖန် မမှန်တဲ. သတင်းတွေကို တန်ပြန်ဖို. အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ.သူတွေ နိုးကြားကြပါ။ အစိုးရ လည်း ဂရမ်မီ အသံဆု နှင်.တကွ အကယ်ဒမီ သရုပ်ဆောင်ဆု ရခွင်. မရှိ။ အလားတူပဲ-ပြည်ပ မီဒီ ယာ၊ အန်ဂျီအို များ၊ တကယ် မ၀ဲပဲ လူကြားကောင်းအောင် ၀ဲတဲတဲ လုပ်လေသော လူ.အခွင်.အရေး အမည်ခံတွေ လည်း- အသံ ဂရမ်မီဆု မရသင်.ပါ။ ရခိုင်တွေ၊ ဘယ်တုန်းကမှ အကြမ်းမဖက်တဲ. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကို ဘက်ပေါင်းစုံကစော်ကားစိမ်ခေါ်နေကြတာမို. အမျိုးသားရေးမို. သိတဲ.နည်း ၊ရတဲ.နည်း သုံး၊ နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီးဆန်.ကျင်ကြမယ်။
ဦးစိုးမြင့်၊ ချိုလေးမာ၊ မောင်ခင်ထွေးတို့နဲ့ မစ္စတာ ကင်တေးနား၊ ဘူးသီးတောင်က ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မူ
မနေ့က (သြဂတ်စ်လ ၁ရက်နေ့) ဘူးသီးတောင်ကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ် ကင်တေးနားဟာ ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲက ယူအန် ၀န်ထမ်း (၃) ဦး အပါအ၀င် ရှေ့နေတွေ၊ သူ့မိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူဟာ နံနက် (၉) နာရီခန့်မှာ ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ အတူ စစ်တွေကနေ ဘူးသီးတောင်ကို ရောက်ရှိလာပြီး ရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ဘူးသီးတောင်ထောင်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယူအန် ၀န်ထမ်း မွတ်ဆလင် သုံးဦးဖြစ်ကြတဲ့ ဦးစိုးမြင့်၊ မချိုလေးမာနဲ့ မောင်ခင်ထွေးတို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ အမည်မဖေါ်လိုသူ ထောင်အရာရှိကြီး တစ်ဦးက နိရဉ္စရာကို ပြောပါတယ်။
“ တွေ့တာက ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီခွဲထိ တွေ့ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ သီးသန့်ဘဲ တွေ့ကြတာပါ” လို့ဆိုပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ယူအန် ၀န်ထမ်း (၃) ဦးဟာ တခြား အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်း ၆ ဦးနဲ့ အတူ မောင်တောမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ အတွင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ သူတို့ကို အိမ်တွေ မီးရှို့မူ၊ ဆူပူဖြစ်အောင် စာရွက်စာတန်းတွေ ဖြန့်ဝေမူတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်” လို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တေးနားဟာ သူတို့ (၃) ဦးနဲ့ တွေ့ပြီး ထောင်ထဲကနေ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲမှာ ထွက်လာတဲ့ နောက်မှာ ဘူးသီးတောင်မြို့ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်မှာ ရှိတဲ့ ဦးစိုးမြင့်နေအိမ်ကို သွားရောက်ပြီး အေးဒီမှာ ဦးစိုးမြင့် မိသားစုရယ်၊ ရန်ကုန်က ရောက်ရှိနေတဲ့ ရှေ့နေ (၂) ဦးနဲ့ပါ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာတွေကို ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာတော့ မသိရဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တေးနား ဘူးသီးတောင်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ၉ နာရီကနေ ၁၂ နာရီ အချိန်ထိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၂၀၀ ခန့်က ထောင်ရှေ့မှာ နိုင်ငံတော် အလံတွေ၊ ပိုစတာတွေကို ကိုင်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်တာက ယူအန်နဲ့ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုတွေဟာ ဘက်လိုက်မူတွေ ရှိနေပြီး လူ့အခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံရေးကို ၀င်ရှုပ်နေတဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ RNDP ဘူးသီးတောင်က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုသန်းလိူင်က ပြောပါတယ်။
“ သူတို့ အန်ဂျီအိုတွေ တရားမျှတမူ မရှိဘူး။ ဘက်လိုက်မူတွေ ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ ၀င်ရှုပ်နေတာတွေကို နေ့စဉ် ရက်ဆက်ဆိုသလို ကြားနေရတယ်။ ဒါကြောင့် INGO တွေ get out ဆိုတဲ့ ပိုစတာတွေ၊ တီရှပ်တွေကို ၀တ်ပြီး ဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
“ ပိုစတာတွေထဲမှာ တရားမျှတမူ ရှိပါစေ၊ သမ္မတကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာပါ။ နိုင်ငံတော် အချုပ် အချာ အာဏာကို လေးစားပါ။ ခွဲခြားဆက်ဆံမူ အလိုမရှိ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကိုဆိုဗိုလို မဖြစ်စေနှင့် စတဲ့ စသားတွေကို ကိုင်ပြီး ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် ၉ နာရီကနေ နေ့လည် ၁၂ နာရီထိ ဘူးသီးတောင် ထောင်ရှေ့မှာ ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီးရင် ကျွန်တော်တို့က ကင်တေးနားနဲ့ တွေ့ခွင့်တောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွေ့ခွင့်မရပါဘူး” ဟု ကိုသန်းလိူင်က ပြောပါတယ်။
ဒီ မစ္စတာ ကင်တေးနားရဲ့ ဘူးသီးတောင် ခရီးစဉ်ဟာ မွတ်ဆလင် ဘင်္ဂလီတွေကို အဓိက အလေးထားပြီး လာကြည့်တဲ့ ခရီးစဉ်သာ ဖြစ်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် ဘာမျှ မျှော်လင့်စရာ မရှိဘူးလို့ အခု ကင်တေးနား ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုသန်းလိူင်က သုံးသပ် ပြောဆိုပါတယ်။
ခုလို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်တာကိုတော့ အာဏာပိုင်တွေက ဘာမှ ဟန့်တားတာ မရှိဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
ဇူလိူင်လ ၃၁ ရက်နေ့ မောင်တော ခရီးစဉ် အတွင်းမှာလည်း မစ္စတာ ကင်တေးနားကို လူပေါင်း ၂၀၀ ခန့်က နိုင်ငံတော် အလံတွေ၊ ပိုစတာတွေကို ကိုင်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမူတွေ မပြုလုပ်ဖို့၊ နိုင်ငံတော် အချုပ်အချာအာဏာကို လေးစားလိုက်နာဖို့ ၊ သမ္မတရဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာဖို့ ဆန္ဒတွေ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ မောင်တော မြို့ခံတွေက ပြောဆိုပါတယ် ခင်ဗျား။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် စစ်တွေလာမည်
“ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်မြို့လုံး လေဆိပ်ကို မနက်ဖြန် သမ္မတကြီးကို သွားကြိုဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု အမည် မဖေါ်လိုသူ နိုင်ငံရေး သမား တစ်ဦးက ပြောသည်။
သမ္မတကြီးသည် သြဂတ်စ်လ ၃ ရက်နေ့ နံနက်တွင် စစ်တွေမြို့သို့ အထူး လေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိမည်ဟု သိရသည်။
၀ါဆိုလပြည့် တရားဟောနေစဉ် သဲချောင်းကို ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရန် ဆူပူလိုသူများ ကြိုးပမ်း
ဒီကနေ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ညနေဘက် စစ်တွေမြို့နယ် သဲချောင်းကျေးရွာမှာ ဆရာတော် တရားဟောနေစဉ် အနီးအနားက ဆူပူလိုသူ မွတ်ဆလင် ၂၀၀ ကျော်ခန့်ဟာ တုတ်ဓါးတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရန် ၀ိုင်းဝန်းလာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို ၀ိုင်းဝန်းလာတဲ့ အတွက် အနီးအနားက စစ်တပ်ကို ဖုံးနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ အတွက် တပ်ရင်းမှူးကိုယ်တိုင် ကားတွေနဲ့ လာပြီး တားဆီးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ ညနေ ၅ နာရီကျော် ဆရာတော် တရားဟောလို့ မပီးတပီးမှာ ဖြစ်တာပါ။ စစ်တပ်က ရောက်လာတဲ့ အတွက် လူစုကွဲပြီး ဘင်္ဂလီတွေ ၀င်ပြေးသွားကြပါတယ်။ အခု စစ်တပ်နဲ့ လုံထိန်းတွေ ရွာထဲကို လိုက်သွားပါတယ်” ဟု သဲချောင်း ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
အခုအခါမှာတော့ အခြေအနေ အေးဆေး ငြိမ်သက်သွားပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားတော့ မရှိသေးဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
လျှပ်စစ် (၁) ၀န်ကြး ဦးဇော်မင်းရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာမှု...
အနောက်မီဒီယာ၊ သူ.ဖေါက်သည် ဘင်ဂါလီ။ ဂရမ်မီဆု လုံးလံ...
ဦးစိုးမြင့်၊ ချိုလေးမာ၊ မောင်ခင်ထွေးတို့နဲ့ မစ္စတာ...
၀ါဆိုလပြည့် တရားဟောနေစဉ် သဲချောင်းကို ၀ိုင်းဝန်းတိ...